COPPER SULFATE: WAXYEELLADA BINI-AADANKA, CALAAMADAHA SUMOWGA IYO DAAWEYNTA GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Waxyeellada iyo cawaaqibka ka yimaada sumaha jidhka bini'aadamka ee leh sulfate copper
Isticmaalka sulphate copper waa mid aad u kala duwan oo aan caan u aheyn. Laakiin waxay faa'iido u yeelan doontaa haddii si sax ah loo isticmaalo, haddii kale suurtagal maaha in laga fogaado sarkhaantu. Tixgeli kiisaska qalabkani waxyeelo u geysan karo qof.
Waa maxay waxyeellada budada sulfate ee jidhka bini'aadamka?
Copper sulfate waa hygroscopic (qoyaan lagu nuugo) budada leh buluugyada buluugsan ama buluugga. Maaddadu waa sunta, qowlka 4aad ee khatarta ah, waa waxyeello haddii xuubka xuubka uu saameeyo oo la cuno.
U hoggaansanaanta xeerarka amniga ayaa ah mid habboon oo lagama maarmaan ah halkan, sida isticmaalka taxaddar la'aanta ah xitaa dhimasho waa suurtagal. Dhibaatada ugu weyn ee kalluunka. Sulfate sulfate (CuSO4) marka biyaha lagu kala diro (H2O) waxay sameeyaan kareemayaal ah vitamin-ka (CuSO4 · 5H2O).
Soo ogow sidee iyo waxa loo isticmaalo maadada bakteeriyada sulfate iyo Bordeaux.
Maaddooyinka sayniska, kumbiyuutarradan waxaa lagu magacaabaa "pentahydrate buluug". Xasaasiyadda waxaa weheliya saameyn kulul. Copper sulfate waxaa loo isticmaalaa sida antiseptic, bacriminta bakteeritka, fungicide, qayb ka mid ah rinjiyeynta macdanta iyo qalabka elektaroolikitiga, daroogada daawada xoolaha iyo daawada.
Ficilku wuxuu ku saleysan yahay falcelinta falcelinta bakteeriyada ee unugyada fungus ama bakteeriya, taas oo keeneysa isbeddelada aan dib-u-dhicin ee iyaga.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah gobollada gaajada ah ee Irland, wariye wargeyska maxaliga ah ayaa si cad u ogaaday in dalagyada baradhada ku dhow mashiinka copper ay yihiin kuwo caafimaad qaba, iyo meelo kale waxay u egyihiin sidii cirifkii ceelka. Sidaa darteed, hantida faa'iido ee sulfate copper ee beeraha ayaa la helay.
Iyada oo lagu ogaado cilad khaldan ee astaamaha naxaasta sulfate sida SARS (inta badan). Daaweynta ayaa dib loo dhigayaa, cudurku wuxuu noqonayaa mid daba-dheer. Maxay tahay arrin la yaab leh:
isbedelka midabada timaha;
Qalooca kelyaha, beerka, caloosha;
guul darrida nidaamka dareemayaasha;
isbeddelka midabka midabada indhaha iyo maqaarka cagaaran;
isbedelka ilkaha, septum sanka, unugyada maqaarka.
Cawaaqibtu waa mid aad u culus waxayna ubaahantahay faragelin caafimaad oo muddo dheer socota.
Baro sida loo isticmaalo fungicides - Scor, Quadrice, Abiga-Peak, Brunka, Ordan, Thanos, Beddel, Antracol, Acrobat TOP, Albit, Glyocladin, Horus, DNOC, Kuproksat, Fitosporin, Azofos.
Sunta waxaa lagu fuliyaa muuqaalka jirka ee labada xal iyo boodh. Ilaha ugu caansan ayaa laga yaabaa inay yihiin makiinada miraayadaha leh. Qiiqa ka soo baxa maaddada bakteeriyada leh ee walxaha leh sidoo kale wuxuu keenaa sumayn haddii sharciyada ilaalinta neefsashada aan la raacin.
Daaweynta ka hortagga gubashada iyada oo la iska indha tirayo qawaaniinta ka kooban qaybaha bakteeriyada leh waxay keeni karaan cawaaqib aan loo baahnayn. Laakiin sababaha ugu weyn ee sumowga ayaa ah isbeddel aan la oggolayn oo qiyaasta daawada, la'aanta qalabka ilaalinta, dhameystirto ama qayb ahaan la iska dhigo xaaladaha kaydinta iyo isticmaalka.
Waa muhiim! Xalka ayaa loo sameeyey si waafaqsan tilmaamaha, nabadgelyo iyo waxtar badan.
Akhri tilmaamaha oo raac talooyinkooda.
Astaamaha iyo calaamadaha sumowga
Astaamaha ugu weyn ee sumowga bakteeriyada bakteeriyada waa:
haddii la liqo, matag (dhiig ama buluug), xanuunka caloosha, riixitaanka, daal, qufac, murqo xanuun, dhadhanka dhirta iyo wadna garaaca wadnaha;
Nabarada xasaasiyadda iyo xanaaqa waa la oggol yahay marka la taabto maqaarka.
Neefsashada waxay keeni kartaa qufac, hindhiso, madax xanuun, qandho, casaan cad oo indhaha, indha la'aanta habka neefsashada.
Calaamadaha ugu horreeya ee sakhradda laga yaabo inay muuqdaan 4 saacadood ka dib, marmarka qaarkoodna - laba maalmood ka dib marka la dhexgalo walaxda. Talabixin caafimaad iyo gargaar degdeg ah ayaa loo baahan yahay!
Heerka sarkhaantu waxay ku xiran tahay da'da, miisaanka, jiritaanka cudurrada kale ee bini-aadanka, u nugulaanta sunta qaarkood.
Ka hor intaan imaan dhakhtarka, imaanshada ambalaaska waa lagama maarmaan in la ogaado amarka tallaabooyinka asaasiga ah.
Haddii ay dhacdo in la cuno afkiisa, caloosha dhaq, cab cabir 1 qaado oo kaarbiidka firfircoon leh galaas biyo, qaado jilbiye (sodium sulfate, magnesium) iyo xaddi badan oo biyo ah.
Haddii ay dhacdo maqaarka maqaarka, ku dhaq dhumucda vitriol hoos biyo.
Neefsashada buunshaha si aad u hesho hawada cusub, raaci marinka sanka iyo afka si fiican, u qaad wakiil ka durugsan iyo qadar ballaadhan oo biyo ah (heerkulka - febrifuge).
Waa muhiim! Wuxuu kordhiyaa darnaanta sumoobidda isticmaalka caanaha iyo subagga, maadaama sunta si wanaagsan loo kala diro!
Daaweyn dheeraad ah waxaa soo qori doona xirfadle caafimaad.
Sunta: waxa la sameeyo
Buugagaha tixraaca caafimaadka waxay sheeganayaan in copper sulphate ay ka badan tahay 0.6 g halis u tahay matag aad u daran. Qadar ka badan 2 g waxay keenaysaa sumeyn halis ah natiijada dhimashada (xaaladaha qaarkood). Tani waxay ku saabsantahay marar badan isticmaalka joogtada ah, taxadar la'aanta ah ee naxaasta sulfate. Midkeen kastaaba waxa uu wajahayaa baahida loo qabo isticmaalka walaxdan. Waxa ugu muhiimsan waa in la raaco shuruucda iyo xeerarka badbaadada. Ha isticmaalin sulphate copper ku yaal meeshi cunto leh. Waa in lagu kaydiyaa weelasha si adag u xiran carruurta.
Calaamadaha daran (matag, dareen-celin xasaasiyadeed, qandho), wicitaanka ambalaaska waa lama huraan. Kaliya waxay si dhakhso ah ugu gudbin doontaa qaybta daryeelka degdegga ah ee isbitaalka deegaanka si ay u baaraan by takhaatiirta sunta ah iyo samatabbixiyaha.
Haddii ay dhacdo in sifudud khafiif ah (diidmo ka timaadda cusbitaaleynta), takhasusaha heeganka ahi wuxuu noqonayaa takhtaraha qoyska (dhakhtarka qoyska), oo soo saari doona isbitaal, u diri doonaa imtixaan, qori daawo, iyo la tasho qof takhasus leh.
Ma taqaanaa? Illaa iyo hadda, sulfate copper ayaa ku qoran liiste shucaac ah iyada oo loo eegayo kala soocidda Ururka Caafimaadka Adduunka. Sida cad, sababtoo ah wakhtiga dheer loo isticmaalo daroogada oo matagaya. Sidaas awgeed sunta waa lid ku ah isla hal mar.
Daaweynta guriga waxaa suurtagal ah oo keliya sunta daciifka leh ee leh naxaas sulfate oo ka kooban cabitaan fara badan, hawo nadiif ah, ka dib talooyinka daweenta. Haddii dhibaatooyin soo baxaan oo sababay jahawareerinta shaqada gudaheeda, takhasuska ayaa daaweyn doona muuqaalkan. Daaweynta waa in si gaar ah loogu sameeyaa xarun caafimaad iyada oo la kormeerayo dhakhtar.
Soo ogow waxa fangasiirada loo isticmaalo canab iyo xayeysiis.
Astaamaha amniga waxay ku jiraan sharciyada soo socda:
Ka hor inta aanad bilaabin diyaarinta xalka (ama la shaqaynta walaxda), gashado gacmo-gashi, xajin faashad faashad ama neef-qabe, xiro muraayadaha difaaca, dooro guud ahaan gacmo-gacmeedyo dheer;
inta lagu jiro shaqada daroogada si looga saaro suurtogalnimada dhibcaha xalka ee indhaha iyo xuubka xuubka, waa mamnuuc in la qaato biyo, cunto, waa inaad joojisaa sigaarcabka;
ka dib markaad daaweynaysid, qolka hawo gasho, qubeyso, ku dhaq afkaaga, sanka, indhaha biyo socda, tag hawo cusub.
Ka hortagga shaqo joogta ah qalabka
In seminaaro warshadeed, sumowga bakteeriyada saafiga ah waxaa laga fogaadaa adoo raacaya heerarka amniga iyo xeerarka. Shaqada ka dib, waa inaad qubeysid oo aad iska beddesho dharka. Markaad guriga joogtid, kaydinta walaxda ku jirta weel xiran ayaa looga baahan yahay, ka fog carruurta, qol aan cunto lahayn, iyo hawo wanaagsan.
Isticmaalka copper sulfate waxaa lagu dabaqaa astaamaha caarada budada ah, nodule, septoria, kallana, rooti, ​​madow, dabaylo goor dambe.
Inta lagu jiro shaqada si loo isticmaalo gacmo gashi, dhibco, neefsasho, si ay u dhawraan sharciyada badbaadada. Ka dib shaqada, qaado nadiifinta qoyan, beddel dharka, u samee daweynta biyaha. Cab biyo badan. Haddii aad dareemaysid xanuun, la tasho dhakhtar.
Inorganic copper sulphate waa dalbasho oo caan ah sababtoo ah sicirkeedii hoose iyo khatartii ka yarayd jawiga deegaanka marka loo eego horumarka ugu dambeeyay ee kiimikooyinka sunta ah ee ka soo jeeda qaybo dabiici ah. Si kastaba ha noqotee, si aan dhibaato u qabin caafimaadka, waa inaad raacdaa xeerarka badbaadada shakhsi ahaaneed.